Guddiga Dastuurka Jubbaland oo loogu baaqay in Gedo ay isaga baxaan iyo Banaabax taageero oo socda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddiga Dastuurka Jubbaland oo loogu baaqay in Gedo ay isaga baxaan iyo Banaabax taageero oo socda
9th June 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Isagoo u warramayay idaacadaha ee Magaalada Muqdisho Max’ed Axmed Cali oo ka tirsan Golaha Guurtida Gobolka Gedo ayuu ugu baaqay Guddiga Dastuurka Maamulka KMG ah ee jubba in ay isaga baxaan deegaanada Gobolka Gedo.
Max’ed Axmed Cali ayaa ka digay dhibaato ka dhalato dhaq dhaqaaqyada Guddiga Dastuurka Maamulka Jubbaland ay ka wadaan deegaanada Gobolka Gedo , oo uu sheegay in dadka Degan Gedo horay loogu xaqiray Maamulkaasi Jubba.
Gobolka Gedo ayaa waxaa ka arrimiso dowladda Federaalka Soomaaliya iyadoo Masuuliyiinta iyo shacabka halkaasi ay horay u qaadaceen Maamulka KMG ah ee jubba oo deegaan ahaan xisaabsada Gobolkaasi.
Si kastaba Jubbaland ayaa ku howlan dhaqan gelinta Dastuurka Maamulkaasi xilli haatan muran uu ka jiro Baarlamaankii Maamulkaas oo Baarlamaanka dowladda dhexe uu kala diray.
sidoo kale reer Garbahaarey oo isgu soo baxey banaabax taageero barlamaanka soomalya hoos ka aqriso
—Banaanbaxani oo ahaa mid ballaaran islamarkaana ay soo qaban qaabiyeen qeybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Magaalada Garbahaareey ee Gobolka Gedo ayaa ahaa mid lagu tageerayay go’aankii Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ay ku kala direen Golaha Wakiilada Maamulka KMG ah ee Juba.
Mid ka mid ah Dadkii qeyb galay Banaanbaxaasi oo la hadlay Idaacaddaha ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegya in Banaanbaxooda ay uga soo horjeedaan Golaha Wakillada Maamulka Juba, isagoo tibaaxay in markii horeba Baarlamaankaasi lagu soo dhisay si aan cadaalad aheyn, sida uu hadalkau yiri.
Dibadbaxani maanta ka dhacay Magaalada Garbahaareey ee Gobolka Gedo oo ay isugu soo baxeen Boqolaal Dad weyne ah ayaa imaanaya Xili maalmihii ugu dambeeyay ay soo ifbaxayeen tabashooyinka laga qabo hanaanka loo soo xulay Golaha Wakiilada Maamulka KMG ah ee Juba kaasi oo dhawaan ay laaleen Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya
Cirfo “Fallaago ah ayaa qabsatay Dhuusa Mareeb, Ahlusuna ma ahan”